नेपालले ईतिहासमा पहिलोपटक सगरमाथाको उचाइ मापन गर्दै,को-को पुग्दैछन् टाकुरामा : Sajha Network - Nepal's No. 1 Online News Portal
नेपालले इतिहासमा पहिलो पटक सगरमाथाको को उचाई मापन गर्ने कार्य सगरमाथादेखि दक्षिणतिरका मध्यपहाडी तथा तराई क्षेत्रबाट शुरू भइरहेको छ ।
विश्वको सर्वोच्च शिखरको उचाइ मापन कार्यले अहिले निकै गति लिएको नापी विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सगरमाथाको नापी कार्यमा अहिले दक्षिणको सिराहदेखि सोलुखुम्बु लगायतका स्थानमा नापी प्राविधिकहरू खटिइसकेका छन् । सगरमाथाको टुप्पैसम्म पुगेर मापन कार्य पूरा गर्न आगामी वसन्त ऋतुमा चार जना नापी प्राविधिकहरूलाई सगरमाथामा पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
“चारमध्ये दुई जना टुप्पैसम्म पुग्नेछन्; दुई जनाले चाहिँ आधार शिविरमा रहेर काम गर्ने छन्,” नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले भने ।”पाँच जना छानिने छन् । एक जना जगेडा बस्नु पर्छ ।”
कत्तिको उत्साहित छन् प्राविधिकहरू
सगरमाथा चढ्ने काम निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। हरेक वर्ष कैयौँ आरोहीहरूको आरोहण गर्ने वा तल झर्ने क्रममा विभिन्न दुर्घटनामा परेर ज्यान जाने गरेको छ । हिउँ तथा बरफसँगको निरन्तर पौँठेजोरीको क्रममा कतिपय आरोहीले आफ्ना हात वा खुट्टाका औँलासमेत गुमाउन पुग्छन् । निरन्तर सेतो हिउँ हेर्नु पर्दा कतिपय आरोहीको आँखाको ज्योति समेत गु्म्छ। तर नापी विभागमा सगरमाथाले अहिले उत्साहको लहर नै ल्याएको छ। त्यहाँका १९ जना प्राविधिकहरूले सगरमाथा चढ्ने इच्छा प्रकट गर्दै आवेदन हालिसकेका छन्।
“उहाँहरू २२-२३ देखि ५२ वर्ष उमेरको हुनुहुन्छ। प्राविधिकदेखि इन्जिनियर र अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मले चासो देखाउनु भएको छ,” नापी विभागका निर्देशक एवं सुचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताए । कौतूहल हुन सक्छ: नेपालको पहिलो आफ्नो सगरमाथा नापी अभियानमा के महिला कर्मचारी वा प्राविधिकले पनि चासो देखाएका होलान् ? जबाफमा ढकालले भने, “आवेदन दिनेहरूमा महिला पर्नु भएको छैन।”
२२ पटक सगरमाथाको शिखरमा पाइला राखिसकेका प्रख्यात पर्वतारोही कामीरिता शेर्पाले नेपालको पहिलो सगरमाथाको उचाइ मापन प्रयासको खबर सुनेर शेर्पा समुदाय तथा आरोहीहरू पनि उत्साहित भएको बताए। उनी आउने वसन्तमा पनि सगरमाथा आरोहण गर्ने तयारीमा छन् । उनले भने, “विदेशीले नापिसकेका छन्। अब नेपाल आफैँले गर्न लागेको नापी टोलीमा म आफैँ पनि सहभागी हुन पाए त्यो मेरो लागि गौरवको विषय हुनेछ।”
नेपाल आफैँले कहिल्यै सगरमाथाको नापी गरेको छैन। विश्वको सर्वोच्च शिखरको पहिचान भएपछि त्यो हिमाली चुचुरोलाई अङ्ग्रेजहरूले माउन्ट एभरेस्ट नाम दिए। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले त्यसलाई नेपाली नाम दिए – सगरमाथा। त्यसको पहिलो मापन सन् १९५० को दशका भारतकै सक्रियतामा भएको थियो। त्यसपछि त्यसको उचाइ ८,८४८ मिटर भनियो। नेपाल र बाँकी विश्वले त्यही उचाइ स्वीकार गर्‍यो।
सन् २००५ तिर चिनियाँ नापी सर्भेपछि ‘चुमोलोमा’ अर्थात सगरमाथाको उचाइ ८,८४४ जति रहेको र त्यसमा हिउँको उचाइ चार मिटर जति रहेको निष्कर्ष निकालियो। उचाइ विवाद झनै चर्किन पुग्यो। सन् २०१० तिर मात्रै सगरमाथाको उचाइ पुन: ८,८४८ मिटर नै हो भन्ने सहमति जुट्यो।
नापी विभागका महानिर्देशक भट्ट भन्छन्, “यो वैज्ञानिक काम हो। वसन्त ऋतुमा हामी आरोहण गर्न सफल भयौँ भने हाम्रो सर्वेक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने र भिडाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी मापनको नतिजा निकाल्छौँ।”स्रोत – बीबीसी